Excel Yakawanikwa Isingaverengeke Zvemukati
musha Products DataNumen Excel Repair Excel yakawana zvemukati zvisingaverengeki mu "filename.xslx".
Ruzivo rwakadzama nezve "Excel Yakawanikwa Isingaverengeke Zvemukati" Kanganiso
Kana uchivhura yakakuvadzwa kana yakashata Excel XLSX faira ine Microsoft Excel, iwe unoona inotevera inotevera mhosho:
Excel yakawana zvemukati zvisingaverengeki mu. Iwe unoda kudzoreredza zvirimo mune iri bhuku rebasa? Kana iwe ukavimba kunobva bhuku rino rebasa, tinya Yes.
iko filename.xlsx izita reiyo yakashata kana yakanganisa faira reExcel.
Kana ukasarudza "Hongu", ipapo Excel ichaedza kugadzirisa iyo yakashata Excel faira. Pane mamiriro maviri, sezasi:
1. Excel haigone kugadzirisa iyo faira.
Muchiitiko ichocho, icharatidza inotevera mhosho meseji:
Excel haigone kuvhura iyo faira 'filename.xlsx' nekuti iyo fomati fomati kana kuwedzerwa kwefaira hakushandi. Tarisa uone kuti iyo faira haina kushatiswa uye kuti iyo faira yekuwedzera inoenderana nemhando yefaira.
Pazasi pane skrini yemessage yekukanganisa:
2. Excel inogona kugadzirisa iyo faira.
Pakadaro, icharatidza inotevera meseji:
Excel yakakwanisa kuvhura iyo faira nekugadzirisa kana kubvisa izvo zvisingaverengeke zvemukati.
nezviri kugadziriswa kana kubviswa zvakanyorwa pazasi pemessage.
Pazasi pane muyenzaniso skrini yemessage:
Mushure mekubaya bhatani re "Vhara", Excel ichavhura iyo yakagadziriswa faira. Pane mamiriro maviri:
Dzimwe dhata dzinowanikwa mune yakamisikidzwa faira, asi yakawanda data iri lost mushure mekugadzirisa / kugadzirisa maitiro.
Hapana chaiyo data iripo mune yakagadziriswa faira mushure mekugadzirisa / kugadzirisa maitiro.
Kana uchivhura yakakuvadzwa kana yakashata Excel XLS faira ine Microsoft Excel, iwe uchaonawo yakafanana meseji yekukanganisa
Gwaro rakaora uye harigone kuvhurwa. Kuti uyedze uye uigadzirise, shandisa iyo Vhura uye Gadziridza rairo muVhura dialog bhokisi, uye sarudza Bvisa Dhata kana uchikurudzirwa.
Kana ukasarudza "Zvakanaka", ipapo Excel ichaedza kugadzirisa iyo yakashata Excel faira uye kuratidza inotevera meseji:
Zvikanganiso zvakaonekwa mu 'filename.xls,' asi Microsoft Office Excel yakakwanisa kuvhura iyo faira nekugadzira iyo yakanyorwa pazasi. Sevha iyo faira kuti izvi zvigadziriswe zvechigarire.
uko filename.xls ndiyo yakashata faira reXLS iri kugadziriswa.
Uye mhedzisiro yekugadzirisa ichave yakanyorwa pazasi pemessage.
Mushure mekubaya bhatani "Vhara", Excel ichavhura iyo yakagadziriswa faira Nekudaro, yakawanda data ndeye lost mushure mekugadzirisa / kugadzirisa maitiro.
Kana yako faira reExcel yaora uye zvimwe zvikamu zvisingazivikanwe neExcel, ipapo Excel inozivisa iyi meseji yekukanganisa uye edza kuigadzirisa. Nekudaro, nekuda kwekuganhurirwa kugona kupora kweExcel, mushure mekugadzirisa / kugadzirisa maitiro, hapana chaiyo data ichawanikwa kana yakawanda data ichave lost.
Unogona kushandisa DataNumen Excel Repair kudzoreredza yakaora faira reExcel, iro rinowana yakawanda yakawanda data kupfuura Excel.
Semuenzaniso Faira 1:
Yakaipa XLS faira: Kukanganisa4.xlsx
Iine Excel yakavakirwa-mukati yekugadzirisa basa, Excel inotadza kugadzirisa iyo faira.
ne DataNumen Excel Repair: 100% data inogona kupora.
Iyo faira yakagadziriswa na DataNumen Excel Repair: Kukanganisa4_fixed.xls
Semuenzaniso Faira 2:
Yakaipa XLS faira: Kukanganisa3_1.xlsx
Iine Excel yakavakirwa-mukati kugadzirisa basa, 0% sero data inogona kuwanikwa.
ne DataNumen Excel Repair: 61% data inogona kupora.
Iyo faira yakagadziriswa na DataNumen Excel Repair: Kukanganisa3_1_fixed.xls
Semuenzaniso Faira 3:
Yakaipa XLS faira: Kukanganisa3_2.xlsx
ne DataNumen Excel Repair: 36% data inogona kupora.
Iyo faira yakagadziriswa na DataNumen Excel Repair: Kukanganisa3_2_fixed.xls
Semuenzaniso Faira 4:
Yakaipa XLS faira: Kukanganisa3_4.xlsx
ne DataNumen Excel Repair: 16.7% data inogona kupora.
Iyo faira yakagadziriswa na DataNumen Excel Repair: Kukanganisa3_4_fixed.xls
Semuenzaniso Faira 5:
Yakaipa XLS faira: Kukanganisa3_5.xlsx
ne DataNumen Excel Repair: 95% data inogona kupora.
Iyo faira yakagadziriswa na DataNumen Excel Repair: Kukanganisa3_5_fixed.xls
Semuenzaniso Faira 6:
Yakaipa XLS faira: Kukanganisa3_7.xlsx
ne DataNumen Excel Repair: 5% data inogona kupora.
Iyo faira yakagadziriswa na DataNumen Excel Repair: Kukanganisa3_7_fixed.xls
Semuenzaniso Faira 7:
Yakashata XLSX faira: Kukanganisa2_1.xlsx
Iine Excel yakavakirwa-mukati kugadzirisa basa, 50% sero data inogona kuwanikwa.
ne DataNumen Excel Repair: 89% sero data inogona kuwanikwa.
Iyo faira yakagadziriswa na DataNumen Excel Repair: Kukanganisa2_1_fixed.xls
Semuenzaniso Faira 8:
Yakaipa XLS faira: Kukanganisa2_2.xls
Iyo faira yakagadziriswa na DataNumen Excel Repair: Kukanganisa2_2_fixed.xlsx